WAR DEG DEG AH: Afhayeenkii Gobolka Banadir oo xabsi Guri la geliyay & xubno xilalka laga qaadayo – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWAR DEG DEG AH: Afhayeenkii Gobolka Banadir oo xabsi Guri la geliyay & xubno xilalka laga qaadayo
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xayiraad lagu soo rogay afhayeenkii maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane.
Afhayeenka oo sidoo kale ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada NISA ayaa la sheegay in lagu amray inuusan gurigiisa kasoo bixi karin, waxaana uu saxafiyiinta u xaqiijiyey inuu xabsi guri ku jiro.
Sababta xayiraadda loogu soo rogay afhayeenka Maamulka G/Banaadir ayaa la sheegay inay salka ku heyso War-saxaafadeedkii uu ka akhriyay xarunta gobolka Banaadir oo ku saabsanaa in laba sano la doortay guddoomiyihii hore ee G/Banaadir Taabit Cabdi Maxamed.
Warar kale ayaa sheegaya in xubno ka mida maamulka gobolka oo ay ku jiraan guddoomiyeyaal degmo la qorsheeyay in xilka laga qaado.
Sawirro:-Axmed Madoobe”Qorshaha Amni Iyo Midka Horumar Waan Gaarsiineynaa Degmooyinka Ku Jira Gacanta Jubbaland”
52,933 total views, 820 views today
52,933 total views, 820 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
53,003 total views, 820 views today
53,003 total views, 820 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
53,014 total views, 820 views today
53,014 total views, 820 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
53,036 total views, 821 views today
53,036 total views, 821 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
53,074 total views, 821 views today
53,074 total views, 821 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]